अन्तत: २५ जनवरी देखि इजिप्ट मा सुरु भएको आन्दोलन १८ दिनपछि टुङ्गिएको छ । १८ दिन को लगातार को आन्दोलन पछि, बाध्य भएर उपराष्ट्रपति ओमार सुलेमान ले घोषणा गरे, राष्ट्रपति होस्नी मुवारकले राजिनामा दिएर सत्ता आर्मीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त घोषणा सँगै इजिप्ट का जनता को आन्दोलन टुंगिएको छ भने, देशमा मात्र नभइ फेसबुक, ट्विटर र यु्ट्युब जस्ता साइटमा विजय उत्सव मनाइरहिएको छ ।
फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा वेवसाइट, ब्लग र युट्युब जस्ता साइटहरु को कति सम्म शक्ति हुँदो रहेछ, इजिप्ट मा भएको आन्दोलन ले देखाएको छ । सबैलाई थाहा नहुन सक्छ तर फेसबुकमा एउटा ग्रुप को निर्माण गरेर इजिप्ट मा आन्दोलन को शंखघोष गरिएको थियो ।
ट्युनिसिया मा महिना दिन अघि भएको आन्दोलन बाट प्रेरित हुँदै इजिप्ट का जनताहरु पनि राष्ट्रपति होस्नि मुवारक को ३० वर्षे लामो शासन को अन्त्य को माग गर्दै आन्दोलन मा होमिएका थिए । फेसबुक को ग्रुप मा केही दिन भित्रैमा लाखौँ हजारौँ सदस्यहरु थपिएका थिए । र तिनै ग्रुपका सदस्यहरुले पहिलो पल्ट राजधानी सहर कायरो मा आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए ।
फेसबुक बाट सुरु भएको आन्दोलन मा तुरुन्तै ट्विटर पनि होमियो । आन्दोलनकारीहरूले ट्विटर को उपयोग भरपुर रुप मा गर्न थाले । ट्विटरबाटै जनताहरु आन्दोलन का लागि जुट्न थाले, के भइरहेको छ, कहाँ के हुँदैछ भनेर इजिप्टका जनताहरुले ट्विटरमा ट्विट गरिरहे । सरकार का विरोध मा फेसबुक र ट्विटर मा निरन्तर इजिप्टका जनताले लेखिरहे अनि आन्दोलन मा होमिन आह्वान गरिरहे । उनीहरुले फेसबुक र ट्विटर बाटै राष्ट्रपति होस्नी मुवारक को राजिनामा मागिरहे । आन्दोलन का फोटो, भिडियोहरु पनि फेसबुक र ट्विटर मा फैलन थालेपछि, इजिप्ट का लाखौँ जनताहरु सडक मा ओर्लिए । फलत आन्दोलन निस्तेज पार्न को लागि सरकार ले फेसबुक, ट्विटर र युट्युब मात्र होइन, सारा इन्टरनेट र फोन सेवानै अवरुद्ध पार्यो । इन्टरनेट र सुचना प्रविधि को युग मा ५ दिन सम्म इजिप्ट ‘अफलाइन’ भयो । ५ दिन पछि इन्टरनेट सेवा फेरि सञ्चालन मा आयो तर आन्दोलन झनै चर्कियो । साँच्चै भन्ने हो भने, इजिप्टका जनताले फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल का साइटहरु को सही किसिम ले सदुपयोग गरे । नेपाली भ्वाइस का ब्लगर उज्वल आचार्य को भनाइ लिने हो भने “ट्विटर भनेको जनता को आवाज हो” (Tweets: People’s voices) भनेर मान्न सकिन्छ । नेपाल मा १९ दिने जनआन्दोलन हुँदा ट्विटर र फेसबुक थिएनन् हुँदो हो त नेपाल मा पनि त्यसको प्रयोग अत्याधिक रुपमा हुन्थ्यो होला । तर जनआन्दोलन का बेला नेपाल मा केही ब्लगहरु थिए, अनि जनआन्दोलन को बेला ब्लग ले निकै ठूलो भुमिका खेलेको थियो ।
नेपाल मा ट्विटर का प्रयोगकर्ताहरु फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु को दाँजो मा कमै छन् । तर पनि राजिनितक, सामाजिक क्षेत्रमा केही हुँदा ट्विटर चलाउने नेपाली समूहले आफ्ना विचारहरु ट्विटर गरिरहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल को प्रयोगबाट भएको आन्दोलन/विरोध को उदाहरण खोज्न हामी इजिप्ट सम्म पुग्नु पर्दैन । गतवर्ष नेपालमै पनि फेसबुक मार्फत विशाल प्रदर्शन भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल को राजिनामा माग गर्दै माओवादी ले देशै ठप्प हुने गरि नेपाल बन्द गरेपछि, नेपाल मा पनि फेसबुक मार्फत नै विरोध को स्वर गुन्जिएको थियो । एउटा इभेन्ट पेज निर्माण गरेर लाखौँ को संङ्ख्या मा माओवादी बन्द को विरोध मा जनताहरु वसन्तपुर मा भेला भएका थिए । (हेर्नुस् - फेसबुक बाटै बन्द को विरोध [Friday Tech] ) त्यसपछि बाध्य भएर माओवादीले आफ्नो आन्दोलन विचै मा रोक्नु परेको थियो ।
ब्लग ट्विटर र फेसबुक मार्फत नै अनुराधा कोइराला को लागि भोट मागिएको थियो, फलत उनी सिएनएन हिरो हुन सफल भइन । त्यस्तै यु्ट्युब मार्फत भोटिङ गरेर अनुप पौडेल को ‘Democracy is Black’ भन्ने भिडियो ले, भिडियो च्यालेन्ज मा सर्वोत्कृष्ट बनेको थियो । अनि ७ महिना सम्म देशमा नयाँ सरकार नबन्दा सयौँ ग्रुप र फ्यानपेजहरु र ट्विटर मार्फत जनताहरुले आफ्ना आक्रोश पोखिरहेका थिए । अनि काठमाडौँ मै ट्विटरमार्फत ‘बारक्याम्प’ नामक कार्यक्रम नियमित रुपमा आयोजना हुने गरेको छ । साँच्चै भन्दा, फेसबुक र ट्विटर को प्रयोग सही तरिका ले गर्न जानिएको खण्डमा ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ ।
इजिप्ट का जनताले मात्र नभइ रिपोर्टिङ स्थल मा खटिएका पत्रकारहरु ले पनि ट्विटर को प्रयोग अधिक रुपमा गरेका थिए । इजिप्ट मा ट्विटर ले खेलेको भुमिका सायदै कुनै इजिप्ट का जनताले बिर्सनेछन् । पत्रकारहरु का ट्विर पच्छ्याउँदै हामीले इजिप्ट का पलपल का खबरहरु थाहा पाइरह्यौँ र आन्दोलन मा ‘भर्चुअल’ साथ दिइरह्यौँ । इतिहासमै पहिलोपल्ट पत्रकारहरुले रिपोर्टिङ गर्दा ट्विटर को अत्याधिक प्रयोग गरे । यतिसम्म कि, प्रहरी र सरकारविरोधी समर्थकहरु बाट आफूले कुटाइ खाएको सिएनएन का प्रख्यात पत्रकार एन्डरसन कुपर ले तत्काल ट्विट गरेर इजिप्ट को स्थिति को बारेमा सारा संसारलाई जानकारी दिएका थिए ।
यसबाहेक, अलजजिरा टेलिभिजन ले पनि एउटा नयाँ इतिहास रचेको छ । ट्युनिसिया मा भएको आन्दोलन को रिपोर्टिङ गरेर चर्चा मा आएको अलजजिरा ले इजिप्ट आन्दोलन को रिपोर्टिङ गरेर ‘सिएनएन’ को झझल्को दिलायो । स्मरणिय रहोस अलजजिरा टेलिभिजन अमेरिका मा प्रसारण मा बन्देज लगाइएको छ । तर अलजजिरा ले आफ्ना फुटेजहरु टेलिभिजन मात्र होइन युट्युब मार्फत प्रसारण गरिरह्यो । यतिसम्म भनिएको थियो कि, अमेरिकीहरु ‘सिएनएन’ हेर्छन् तर ‘सिएनएन’ आफैँ चाँही अलजजिरा हेरिरहेको छ । त्यसबाहेक हिलारी क्लिन्टन, राष्ट्रपति वाराम ओवामाहरुले पनि त्यही अलजजिराका रिपोर्टहरु हेरेर इजिप्ट आन्दोलन को आँकलन गरे अनि अमेरिका ले, इजिप्ट सरकार माथि मुवारक को राजिनामा दिन दवाव दिएको थियो, जनता को आवाज को सम्मान गर्न आग्रह गरेको थियो । अलजजिरा का रिपोर्टिङहरु, फोटो र भिडियोहरु प्राय अन्य सबै सञ्चामाध्यमहरुले प्रयोग गरेका थिए । यसै आन्दोलन पछि, अलजजिरा टेलिभिजनलाई अमेरिका मा पनि प्रसारण गर्न दिनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ ।
१८ दिनपछि आन्दोलन टुंगियो, राष्ट्रपति ले राजिनामा दिए अनि अहिले ट्विटर र युट्युब मा विजयउत्साव मनाइरहिएको छ । युट्युब मा धमाधम भिडियोहरु अपलोड भइरहेकाछन् भने ट्विटर मा खुशीयाली का ट्विटहरु लगातार वर्षिरहेकाछन् । मासावेल साइटबाट हामीले केही ट्विटर मा भनिएका भनाइहरु को फोटो तल राखेका छौँ ।
The Guardian's Twitter network of Arab protests - interactive map – Guardian
Hosni Mubarak resigns – and Egypt celebratesanew dawn – Guardian
Egyptian army calls the shots as nation embarks on democratic transition – Guardian
इजिप्ट मा चर्किँदै आन्दोलन #Egypt – Aakar Post
Egypt's Mubarak resigns as leader – BBC
18 days of protest culminate in Mubarak's ouster - CNN
YouTube & Twitter React to Mubarak’s Resignation – Mashable
Egyptian President Steps Down Amidst Groundbreaking Digital Revolution – Mashable
Tweets: People’s voices – Nepali Voices
Images: Mashable, Guardian, BBC & CNN
I think Nepal has set an example for world modern days revolution, the world was in surprise when neplese defy the curfew and many county later tried to defy curfew impose to shut their voice, similarly last year we used FB and Twitter and ask people to join peace rally and it turn out to beahuge sucess.
Nepal Trek August 1, 2012 at 11:46 AM
Mubarak ko ante sangai naya yug ko suruwat bhayeko chha. congratulation to Egypt people